သင့်ရဲ့အခမဲ့တဏှာ cheat sheet လမ်းညွှန် Download - ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အခမဲ့ပြုလုပ်နိုင်စေ » သင့်ရဲ့အခမဲ့တဏှာ cheat sheet လမ်းညွှန် Download
soda? ပေါင်မုန့်, ချောကလက်? ပီဇာ? ရေခဲမုန့်? သင်တို့သည်ဤအစားအစာများကိုမဆိုစွဲလမ်းနေကြသနည်း သို့ဆိုလျှင်ဤမတရားသောနောက်ကျောကနေသင်တို့ကိုကိုင်ထားကြသည် ကျန်းမာလမ်းအတွက်အလေးချိန်ဆုံးရှုံး? သင်လက်မလျှော့သင့်ဟုသင်သိလျှင်ပင်ငြင်းဆိုရန်သင်မကြာခဏကြိုးစားလေ့ရှိသလား။ ကောင်းပြီ။ မင်းတို့အတွက်ဖြေရှင်းနည်းရှိတယ်။ အဖြေကဒေါင်းလုပ်ဆွဲလို့ရသမျှစာရွက်စာရွက်လမ်းညွှန်ထဲမှာပါ။
Kaelin Tuell မှအခမဲ့ Cravings Cheat Sheet ဖြင့်သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည် အတိအကျဘာကြောင့်လဲ သင်ဤအစားအစာများကိုစွဲလမ်းနေပြီးသင်ဤဆန္ဒများကိုထိန်းချုပ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများကိုသင်ယူတော့မည်။
ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ သင့်ရဲ့တဏှာအဘို့စာရွက် cheat ရ အခမဲ့